नाम ‘जय बागेश्वरी एग्रिकल्चर प्रालि’ काम, कृषक ठग्ने - Nice Samachar
मनोज कार्की १८ मंसिर २०७७, बिहीबार १६:३० 204 पटक हेरिएको
गुल्मी । कुनै समय कृषि सम्बन्धि काम गर्ने विभिन्न कम्पनीहरु गाउँ–गाउँ पुग्थे । र, गाउँका कृषकलाई प्रलोभन देखाएर विरुवा बेच्थे, मुठै–मुठा पारेर पैँसा लैजान्थे । आफ्नो काम पूरा भएपछि भने बेपत्ता हुन्थे । कम्पनीका नाउँमा त्यसै प्रकारले ठगि गर्ने गिरोह अहिले गुल्मी पसेको छ ।
आर्थिक उपार्जनको भविष्य खोज्दै कृषिमा होमिएका गुल्मीका कृषक नेपालगन्जको एक एग्रिकल्चर कम्पनीबाट ठगिएका छन् । रेसुङ्गा नगरपालिका–३ भाडगाउँका कृषकलाई केरा खेतीमा राम्रो आम्दानी हुने प्रलोभन देखाएर बिरुवा बेचेको कम्पनी अहिले लापत्ता भएको छ । पोहोर साल भदौ १ गते जय बागेश्वरी एग्रिकल्चर प्रालि नेपालगन्जले गाउँमा विरुवा वितरण गरेको थियो । समुद्री सतहदेखि १५ सय मिटर माथि केरा खेती हुने भन्दै माटो परीक्षण बिनै बिरुवा रोप्न लगाएको पाइएको छ । १२ देखि १५ महिनामा केराले राम्रो आम्दानी हुने कम्पनीको जिकिर थियो । कृषकले केरा रोपेको १६ महिना बित्यो, आन्दानी त परैको कुरा, रोपेको केरा पसाउने, फल लाग्ने छाँटकाँट नै छैन । केरा बेचेर मनग्य आम्दानी गर्ने सपना बोकेका कृषकको सपनामा तुसारापात भएको छ ।
कम्पनीले यो विरुवाले राम्रो आम्दानी दिने मात्र नभई प्राविधिक सहयोग गर्ने समेतका आश्वासन दिएको थियो । राम्रो आम्दानीको सपना बोकी कृषकले आफ्नो बारीमा मौसमी बाली नरोपी केरा खेती गर्दै आएका थिए । केराका विरुवा वितरण गरेर गाउँका कृषकबाट मात्रै ४ लाख भन्दा बढी लिएको स्थानीयको आरोप छ । अहिले केराखेतीको विषयमा बुझ्न खोज्दा फोन उठ्दैन, उठाए पनि को हो ? किन फोन गरेको ? म त चिन्दिन ? जस्ता जवाफ दिन्छिन्, महिलाले । कम्पनीले जम्मा एक पल्ट जेटिए खटाएको थियो । केरा नै नपसाएपछि ति जेटिएले समेत टाप कसे ।
यो विषयमा वडा कार्यालयले आवश्यक प्रक्रिया थालिसकेको बताएको छ । जय बागेश्वरी एग्रिकल्चर प्रालि नेपालगन्जले केराका विरुवा उत्पादन र विक्री वितरण गर्ने गर्दछ । यो विषयमा बुझ्न खोज्दा त्यो कम्पनीका कर्मचारी प्रमुखको नम्बर दिएर पन्छिन् खोज्छन् ।
यसरी कृषक ठगिने कहिले सम्म ? विना कुनै परीक्षण केरा विरुवा वितरण गर्ने र कृषकलाई ठग्नेहरुलाई कारबाही कसले गर्ने ? नाइस टेलिभिजनका लागि गुल्मीबाट मनोज कार्कीको रिपोर्ट
#जय बागेश्वरी एग्रिकल्चर प्रालि